Uzo di elu nke gha agha udi ire ahia Digital | Martech Zone
Uzo Ozo Nke Ga Ebu ahia Digital
Tuzdee, Machị 4, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Lee ihe Infographic dijitalụ ahịa ahịa nke Ethinos banyere usoro kachasị elu; ịre ahịa ọdịnaya, njikarịcha mkpanaka, njigide ọnụego mgbanwe; nke ahụ na-akọwapụta azụmaahịa dijitalụ taa ma ọ nwere ike inwe mmetụta dị oke mkpa n'ọdịniihu ya.
Ihe m nwere ekele maka ihe omuma a bu ihe o na-eche banyere itinye aka na ahia ahia gi. Na Social Media Marketing World ọnwa a, nke a bụ kpọmkwem ihe m ga-enye nghọta na atụmatụ maka. Ndị ahịa na-elekwasị anya na TOFU (elu olulu) na ha na-atụ uche ole ndu na-ada ma ọ bụ na-agbanwe n'ihi na ebumnuche ndị a ezubereghị ma ọ bụ kachasị.
Mee ka ị bụrụ atụmanya na-eleta nwelite ọkwa gị kachasị ọhụrụ, tweet, ma ọ bụ post blog… ebe bụ ụzọ ntụgharị? Ebee ka ihe ịsụ ngọngọ dị? You na-atụle isi okwu ọ bụla n'ụzọ ị ga-ahụ ebe ọnụọgụ ego na-abawanye? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịkwesịrị ịdị.
Tags: digital marketingahia dijitalụethinos
InPowered: Na-akwado Nkwado Ntụkwasị Obi Nke Atọ
Etu esi edobe weebụsaịtị ohuru gi
Mar 5, 2014 na 9: 18 AM
"Social media arụpụta fọrọ nke nta okpukpu abụọ na-edu ndú nke ahia egosi, telemarketing, kpọmkwem ozi ma ọ bụ PPC" - nke ahụ bụ n'ezie na-akpali.
Mar 5, 2014 na 9: 23 AM
Amaara m na mgbasa ozi mmekọrịta dị mkpa ma na-ele anya na nke a, o yiri ka enwere ọtụtụ ihe ga-esoro…
Mar 6, 2014 na 7: 17 AM
Adị m ọhụrụ na ahịa Digital a. Enwere m ezigbo ihu ọma nyocha post a. Ezigbo ozi banyere ahia dijitalụ. Debe akwụkwọ akụkọ. Isiokwu a nwere ọtụtụ nke pụrụ iche na mma